Ku-simaha Duqa Muqdisho oo xarigga ka jaray xarunta cusub Degmada Heliwaa | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR Ku-simaha Duqa Muqdisho oo xarigga ka jaray xarunta cusub Degmada Heliwaa
Ku-simaha Duqa Muqdisho oo xarigga ka jaray xarunta cusub Degmada Heliwaa
Ku simaha Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Gudoomiye ku xigeenka 1-aad ee Amniga iyo Siyaaadda Gobolka Mudane Maxamed Cadullaahi Maxamed ( Tuulah) ayaa xariga ka jaray Xarunta Degmadda Heliwaa oo dhawaan Dib u dayactir iyo qurxin lagu sameeyay.
Dib u dayactirka Xarunta Degmada Heliwaa oo ay si isku tashi ah u dhisteen Shacabka iyo Maamulka Degmadaasi ayaa waxaa ku simaha duqa Magaalada uu kula dardaarmay in bulshada ay ilaashadaan goobaha danta guud ee laguu shaqeeyo.
Dhinaca kale, Xarunta Degmadda Heliwaa ayaa lagu qabtay maanta Shirka isbuuclaha ah ee Guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo Maamulka Sare ee Gobolka Banaadir, waxaana looga hadlay shirkaasi sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka ay roobabka u geysteyn bulshasa Caasimadda.
Ku-simaha Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Maxamed Tuulax, ayaa sheegay in shirka Degmooyinka maalinba degmo lagu qaban doono.
Previous articleXafiiska adeegyada heer degmo ee dowlada hoose oo laga hirgaliyay Deyniile iyo Dharkiinley
Next articleWabiga Jubba oo ku fatahay qeybo ka mid ah Gobolka Gedo.